Mareykanka: Hoggaamiye sare oo Al-Shabaab ah baan duqeyn ku dilnay – HalQaran.com
Mareykanka: Hoggaamiye sare oo Al-Shabaab ah baan duqeyn ku dilnay
Saakow (Halqaran.com) – Taliska Ciidanka Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah ay Talaadadii shalay ku dileen hoggaamiye sare oo ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab.
War qoraal oo ka soo baxay Taliska AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel ku dhow Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe.
AFRICOM ayaan warkan ku sheegin magaca hoggaamiyaha sare ee ka tirsanaa Al-Shabaab, laguna dilay duqeyntaasi.
Wakaaladda Wararka Qaranka (SONNA) ayaa sheegtay in duqeyn ka dhacday Koonfurta Soomaaliya lagu dilay Cabdulqaadir Cismaan Yarow (Cabdulqaadir Kumaandoos).
Cabdulqaadir Kumaandoos ayaa horey uga tirsanaa Saraakiishii Ururkii Xisbul Islaam ee ku biiray Ururka Al-Shabaab. Tan iyo xilligaana wuxuu ku jiray Ururka Al-Shabaab.
Kumaandoos ayaa mar soo noqday Madaxii Jabhadaha ee Ururka Al-Shabaab, iyadoona uu dhawr goor horkacay weeraro lagu galay xeryo ay leeyihiin Ciidamada Dowladda iyo Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Ururka Al-Shabaab kama aynaan hadlin duqeyntan ugu dambeysay ee ka dhacday Koonfurta Soomaaliya, laguna dilay Sarkaal muhiim u ahaa.
Al-Shabaab ayaa inta badan looga baran inay ka hadlaan waxyeelada ka soo gaarta weerarada dhinaca cirka.
Ugu dambeyn, taliska AFRICOM ayaa warka ku sheegay in iyagoo kaashanaya saaxiibadooda, ay sii wadi doonaan weerarada dhinaca cirka ee ka dhanka ah mintidiinta Al-Shabaab.
Tags: Al Shabaab, degmada Saakow, duqeyn lagu dilay, hoggaamiye Shabaab ah
Wasiirka gargaarka ee DF Somaliya oo maanta gaaray Dhuusamareeb